Caringo SWARM - Massive Scale တွင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက်သိုလှောင်သည့်ပလက်ဖောင်း NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » Caringo swarm - ကြီးမားတဲ့စကေးမှာထုတ်လုပ်မှု, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများအတွက်သိုလှောင်ပလက်ဖောင်း
On-demand မီဒီယာ, အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုအင်တာနက်ကဘရော့ဘန်း, လက်ကိုင်ကိရိယာန်ဆောင်မှု streaming, Smart ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် IoT (အရာကအင်တာနက်) ကိရိယာများဖြစ်ပေါ်နေသောမှတဆင့်ရန်လွှမ်းမိုးသော access ကိုအစဉ်အမြဲအကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးဘို့အချိန်ကိုစျေးကွက်-ရန်နှင့်ငွေရှာခြင်းအတွက်မော်ဒယ်ပြောင်းလဲသွားပြီ, မိုးတိမ် OTT (Over-the-ထိပ်) ဝန်ဆောင်မှုပေး, cable ကိုကုမ္ပဏီများ, ထုတ်လွှင့်မီဒီယာပံ့ပိုးပေး streaming, လေကြောင်းလိုင်းများနှင့်တူသော။ အကြောင်းအရာဖန်တီးမှု-စုစည်းမှု-to-ပေးပို့ကွင်းဆက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကုမ္ပဏီများသည်ချောမွေ့စွာနှင့်ထိရောက်စွာမီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်များပြားလှဖြတ်ပြီးဖိုင်မျိုးစုံကိုပုံစံများဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်, ပို့ဆောင်မှု-အဆင်သင့်, ဖိုင်-based အကြောင်းအရာပို့ဆောင်၏ကြီးထွားလာစိန်ခေါ်မှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နှင့် ဖြစ်နိုင်သမျှ-ကာလပတ်လုံး၎င်း၏အရည်အသွေးနှင့်လုံခြုံရေးသေချာနှင့်အစဉ်မပြတ်ဖြန့်ဝေ-to-device ကိုအချိန်ကွာဟချက်ကိုလျှော့ချအမြန်ဆုံးလမ်းအတွက်ပစ်မှတ်ထားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနေရာများမှဆိုင်များတွင်။ ပိုမိုမြန်ဆန်လုပ်ငန်းအသွားအလာကြိမ် Post-ထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးဖိအားပေးနေချိန်တွင်ထိုမှတပါး, တင်းကျပ်ဘတ်ဂျက်နှင့်အတူများစွာသောအကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးပြီးသားစက်မှုလုပ်ငန်းစုစည်းပြီးရင်ဆိုင်နေရကြောင်းဝန်ဆောင်မှုပေးအပေါ်နောက်ထပ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအားမရ (ကြည့်ရှု "ချက်ချင်း access ကို" မျှော်လင့်ထား) အိမျတျော၌ကျောအလုပ်ယူလာကြပါတယ်။
လောလောဆယ်သည် M & E အဖွဲ့အစည်းက CapEx နှင့် OpEx ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနေစဉ်အတွင်းလုပ်ငန်းစဉ်များချောမွေ့ရန်ရှာဖွေနေသည်။ Post ကိုအိမ်များမျှတာဝန်ခံမှာတစ်ခုသို့မဟုတ်အမည်ခံအခကြေးငွေများအတွက် client ကိုအကြောင်းအရာတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကဖိအားပေးလျက်ရှိသည်နှင့်ချက်ချင်းဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပေးပို့ပေး။ ရလဒ်အနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရသောအဓိကဖြစ်ပွားနေသောကုန်ကျစရိတ်အစိတ်အပိုင်းများထဲမှမိမိတို့၏ဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်း-ရှိနေသော်လည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ဖိုင်အရွယ်အစား၏အဆမြင့်တက်တစ်လျှောက်လုံးရရှိနိုင်ပါသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု, သိုလှောင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးဖယ်အစဉ်မပြတ်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်နှင့်၎င်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုတိုးမြှင့်ခြင်းမှ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းဒေတာစင်တာကိုခြေရာ, အခြေခံအဆောက်အအုံရှုပ်ထွေး, လေအေးပေးစက်နှင့်အာဏာအသုံးပြုမှုအတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မြောက်မြားစွာသည်အခြားသက်ရောက်မှုတွေဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်တိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာဖြစ်ပြီးမာဂျင်ပြီးသား compressed ကြသောအခါဒါကြောင့်သင်ကအခမဲ့သိုလှောင်မှုမြော်လင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သလဲ သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များအတွက်လုံခြုံရှာဖွေရေးနှင့်ချက်ချင်း access ကိုပေးနိုင်သလား? သင်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်သို့သင့်ရဲ့သိုလှောင်မှုအကြပ်အတည်းကိုဖွင့်နိုင်ပါသလား? အဖြေအားလုံးသုံးမေးခွန်းများကိုတစ်ဦးအသံ "Yes" ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်နားလည်စေရန်, ဒီလရဲ့ကုမ္ပဏီမီးမောင်းထိုးပြအာရုံစိုက် Caringoယင်းအရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှု 2005 ကတည်းကအာကာသများနှင့်မီဒီယာ & Entertainment က (M & E) နဲ့ရှုခင်းမှာထိပ်တန်းအရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုပလက်ဖောင်းနဲ့ cloud ကလက်ရှိသမ္မတတစ်ဦးအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦး။
Caringo အသုံးပြုသူများသည်ပျက်ပြင်ဆင်ထားသညအချက်အလက်များ၏မည်သည့်အသံအတိုးအကျယ်, စီးဆင်းမှုသို့မဟုတ်အရွယ်အစားကျော်ထိန်းချုပ်ပေးသောအရာဝတ္တုသိုလှောင်မှုဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူရှိ၏ ဟာ့ဒ်ဝဲကနေအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဆွဲထုတ်နေစဉ်သိသိသာသာ, ပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ။ Caringo ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်ကုန်, အများအပြားစုရုံး, ဧရာစကေးမှာရေရှည် data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်, စီမံခန့်ခွဲမှု, အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ရှာဖွေရေးများအတွက်မတူညီသောဖြေရှင်းချက်သို့ data ကိုပြောင်းရွှေ့ရန်လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းစေပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအကျိုးကျေးဇူးများကိုအကြီးအကျယ်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု, elastic အကြောင်းအရာကာကွယ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အလိုအလျောက်ဖွပုတ်ရဲ့အချိုးကျတဲ့ဗိသုကာမှတဆင့်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏နေကြသည်။ အဆိုပါရလဒ်က M & E ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လက်ရှိနှင့်အနာဂတ် Workflows များအတွက်စံပြရဲ့ object တစ်ခုသိုလှောင်မှုဆော့ဖ်ဝဲကိုပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီရဲ့ပိုကောင်းတဲ့ Caringo နှင့် M & E စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုဗိသုကာ၏အကျိုးကျေးဇူးများကဲ့သို့ကုမ္ပဏီတွေက၏အရေးပါမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အချိန်တို့လက်ကိုပြန်လှိမ့်ချလိုက်ကြကုန်အံ့။
Caringo ရဲ့ Evolution နှငျ့ "အေ့ဟေ Moment"
Caringo အတိတ်အဆောက်အဦကုမ္ပဏီများမှအတွက်အတူတကွအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသူကိုဂျော်နသန် Ring ကိုပေါလုသည် Carpentier နှင့် Mark Goro ဖြင့်ပဋိသန္ဓေယူခဲ့ပါတယ်။ ရှင်ပေါလု Carpentier, အကြောင်းအရာလိပ်စာသိုလှောင်မှုကိုတည်ထောင်သူ, EMC Centera (အကြောင်းအရာ-လိပ်စာလို့ခေါ်တဲ့စီးပွားဖြစ်ဟာ့ဒ်ဝဲပစ္စည်းမိသားစုတညျဆောကျအရာ, EMC ရန် FilePool ရောင်းချခဲ့ သိုလှောင်မှုပမာဏ 2003 န်းကျင်မိတ်ဆက် data တွေကိုသိမ်းဆည်းများအတွက် (CAS) ပလက်ဖောင်း) ။
ထိုအချိန်တွင်ကုန်စည်-based ဆာဗာများကျယ်ပြန့်အခြေစိုက်ဖြစ်လာပြီး gigabyte disk space ကိုတစ်ဦးလျှင်ကုန်ကြမ်း၏ကုန်ကျစရိတ်အစာရှောင်ခြင်းကိုဆင်းလာမယ့်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အဟောင်းများကိုအမွေဖိုင်ကို server ကိုရောင်းချသူကအလွယ်တကူသီးခြားသိုလှောင်မှု Silo များဖန်တီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ petabytes နှင့်ကျော်လွန်ပြီးမှစကေးမဟုတ်နိုင်ကြောင်းစနစ်များနှင့်အတူကျောက်ချရပ်နားခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာ Caringo တည်ထောင်အဖွဲ့ကုန်စည်-based Software များ-သတ်မှတ်ထားသောသိုလှောင်မှု (SDS), မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌, စျေးကွက်လွှမ်းမိုးမည်ဟုတဲ့အခါအချိန်ရှိလာလိမ့်မည်ဟုအသိအမှတ်ပြုကြောင်းထို့နောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်တစ်ပွင့်လင်းဘို့လိုအပ်ကြောင်းကွိုမွ, အနားယူ ဝင်ရောက်ခွင့် Software ကို-သတ်မှတ်ထားသောသိုလှောင် commoditized server ကိုနည်းပညာပေါ်မှာ။ ရလဒ်အဖြစ် Caringo 2005 အတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်နှင့်ပထမဦးဆုံးကိုမှန်ကန်ဆော့ဝဲ-သတ်မှတ်ထားသောသိုလှောင်မှုသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကသိုလှောင်မှုမိုဃ်းတိမ်ကိုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ Software များ-သတ်မှတ်ထားသောသိုလှောင်မှု / Cloud သိုလှောင်မှုစျေးကွက်တည်ဆောက်ရန်အချိန်ယူမည်ဟုနှင့်စျေးကွက်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲရန်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဈေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးနည်းပညာတည်ဆောက်ရန်မြို့တော်၏အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုခြင်းကိုအာရုံစိုက်ကြောင်းသိ," ယောနသန်သည်လက်စွပ်, Caringo CEO ဖြစ်သူ & Co. , ကပြောပါတယ် -တည်ထောင်သူ။ "ကျနော်တို့ဟာအလွန်သစ္စာရှိပြီးကျေနပ်မှုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းအတွက်ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်သောလယ်-ခိုင်မာစေဖောက်သည်ဗဟိုပြုထုတ်ကုန်တည်ဆောက်ရန်ဖောက်သည်ပူးပေါင်းမှတဆင့်ကုမ္ပဏီကိုကြီးထွားလာအာရုံစိုက်ပါတယ်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်နှစ်ပတ်လည်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူသို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းနေတဆင့်အစဉ်အမြဲလိုင်စင်တစ်ခုခုကိုအဖြစ် (ရရှိမှုနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသေချာစေရန်ပွားစရာအပိုကုန်ကျစရိတ်) မူရင်းဒေတာများကစားသုံးစွမ်းရည်အပေါ်အခြေခံပြီးစျေးနှုန်းနေကြတယ်။ "
ယနေ့မိမိတို့အမြော်အမြင်နှင့်အတွေးအခေါ်၏ Caringo ရဲ့ validation ကို iQ မီဒီယာပါဝင်သောသူတို့ရဲ့ကြီးထွားလာဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါသည်, Sony က ImageWorks တက္ကဆက်ပြည်နယ် Tech မှတက္ကသိုလ်စနစ်များ, NEP, ကာကွယ်ရေးဦးစီးဌာန, ဘရာဇီးဖက်ဒရယ်တရားရုံးစနစ်, Austin ၏စီးတီး, Telefonica, ဗြိတိသျှတယ်လီကွန်း, Ask.comပိုပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း, ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ်နှင့်ရာနှင့်ချီ။
ဒါဟာ Caringo မတူဘဲအရာဝတ္ထုသိုလှောင်ရန်နေရာအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့နည်းပညာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အများအပြား shortcuts တွေကို ယူ. , ကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။ ဟာ Linux file ကိုစနစ် (ဆက်ပြောသည်ရှုပ်ထွေး, မလိုအပ်သော overhead နှင့်အချက်အလက်ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်အတွက် inode-based file system ကိုရလဒ်များကို) ၏ထိပ်ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုပူဇော်သက္ကာကိုအခွခေံဖြစ်ပါတယ်အကြီးမားဆုံးအရာ၏။ Caringo ရဲ့အကျိုးရှိစွာအကောင်အထည်ဖော်မှုယှဉ်ပြိုင်ဖြေရှင်းချက်များအတွက်သာ 95% သာရှိပြီးပြည်ပမှအသုံးပြုသူမှ disk ကိုစွမ်းရည်၏ 80% ထွက်ခွာမည်။
ပြဿနာများကြောင့် Caringo ရဲ့ Object ကိုသိုလှောင်ဖြေရှင်း
object သိုလှောင်မှုနည်းပညာ, ရှည်အမြီးပိုင်ဆိုင်မှုထင် (လိမ်မာပါးနပ်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးအရအချက်အလက်များ၏ဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းထဲမှာအဆမြင့်တက်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့် M & E စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အဓိကပိတ်ဆို့မှုများအချို့ကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ရာပေါင်းများစွာ-to-သောင်းချီရုပ်ရှင်နှုန်း data တွေကိုဖိုင်တွေအလုပ်လုပ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏, မူရင်း / ရေရှည် data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတို့အတွက် / versioned archive ကိုပိုင်ဆိုင်မှု, etc) ပွား။ Caringo swarm, ပို့ဆောင်စည်းရုံးရေးနှင့်လက်လှမ်းစကေးထွက်ပေးနှင့်အတူဆက်စပ်ပြဿနာများ, အကြီးစားမီဒီယာစာကြည့်တိုက်များအတွက်ရေရှည်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ swarm သင်တစ်ဦးအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးကို web-အိမ်ခြံမြေသင့်ရဲ့ web-based မီဒီယာ application များအတွက်အောင်းနေချိန်လျှော့ချရန်ရှာနေ, OTT နှင့်ဇာစ်မြစ်သိုလှောင်မှုကို enable တစ်လမ်းရှာနေကြသည်ဖြစ်စေ, အသေးစားနှင့်အကြီးစား application များအတွက်စံပြဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုပိုကောင်းအောင်ရှာနေတဲ့ထုတ်လုပ်မှုအိမ်သူအိမ်သား လုပ်ငန်းအသွားအလာ shared သိုလှောင်မှု။ စတူဒီယို, ထုတ်လုပ်မှုအိမ်များ, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးယခုသူတို့လိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမီဒီယာသမာဓိရှိသေချာနှင့်အွန်လိုင်းနှင့်ပြန်သုံးခြင်းနှင့်ငွေရစေခြင်းအဘို့အလက်လှမ်းပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းထားနိုင်တယ်အပါအဝင် M & E အဖွဲ့အစည်းများ။
အထက်ပါအပေါ်တိုးချဲ့ကျနော်တို့ swarm ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအကြိုးပွုနိုငျဘယ်မှာလေးဒေသများမှာကြည့်ရှုနိုင်သည်
Active ကိုမော်ကွန်းတိုက် Multi-ဆိုက်ကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက် & Consolidated: ထုတ်လွှင့်နဲ့ post များ၏အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီ, Real-time ဘုံ၌, ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပြန်သုံးခြင်းနှင့်ဆက်လက်ပူးပေါင်းများအတွက်ရရှိနိုင်ဆက်လက်တည်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ NFS, သည် HTTP သို့မဟုတ် S3 ကနေတဆင့်စာဖြင့်ရေးသား files အားလုံးကိုအခြား protocol ကိုကနေတဆင့်, လက်လှမ်းတည်းဖြတ်ချက်ချင်း retrieval ဖြစ်ကြသည်။ WAN ကျော် LAN နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပွားကျော် synchronous ပွားစီမံခန့်ခွဲမှု-အခမဲ့ဘေးဥပဒ်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအမြီး Episode တူသောအေးပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်အသုံးပြုသူများ drives တွေကိုချလည်နဲ့ CPU ကိုအသုံးချ-ချဉ်းကပ်တိပ်များ၏အနိမ့် TCO လျှော့ချရန် Caringo ရဲ့မူပိုင်ခွင့် Darkive ကိုသုံးနိုင်သည်။
မူလအစသိုလှောင် & OTT ပေးရန်: HTTP မှတစ်ဆင့် Native သုံးစွဲနိုင်, swarm အကြောင်းအရာပေးပို့မူလအစသိုလှောင်မှုအတွက်စံပြနှင့် over-the-ထိပ်ဆုံး (OTT) ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖွင့်သည်။ swarm မကြုံစဖူး 95% စွမ်းရည်အသုံးချနှင့်အတူအကြီးအကျယ် throughput ကယ်တင်တတ်၏။ ကြီးမားတဲ့ဖိုင်တွေနဲ့အကွာအဝေး၏စင်ပြိုင်အပ်လုဒ်တင်သင်သည်အလျင်အမြန်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီးကြည့်ရှုလျင်မြန်စွာဗွီဒီယိုတစ်ခုအတွက်ဆို frame ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်သေချာဖတ်တယ်။
ထုတ်လုပ်မှု-Shared သိုလှောင်ပိုကောင်းအောင်: အများဆုံးတည်းဖြတ်ရေး Workflows ၏စိတ်နှလုံးမှာ Shared ကွန်ယက်သိုလှောင်မှု (NAS) ကိရိယာများပူးတွဲနေကြသည်တစ်စွမ်းဆောင်ရည်ရှုထောင့်ကနေလိုအပ်သောစဉ်, စကေးစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ခက်ခဲများနှင့်စျေးကြီးဖြစ်ကြောင်း။ Caringo ဖြေရှင်းနည်းများ, Window သိုလှောင်ဆာဗာနှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် NetApp Filers shared သိုလှောင်မှု enviroments မှာတည်ဆဲ workflow နှင့် applications များပိုကောင်းအောင်, လွန်စွာလိုလားသော ISIS အဖွဲ့ / Nexis သို့မဟုတ် 3rd ပါတီ Caringo swarm Object ကိုသိုလှောင်ရေးမှသိမ်းဆည်းခြင်း, tier ဒေတာ shared ။ အဆိုပါရလဒ် rip နှင့်အစားထိုးရန်သို့မဟုတ် applications များ, လုပ်ငန်းစဉ်များသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူအပြုအမူကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်မလိုအပ်နှင့်အတူအကြီးအကျယ်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့်လုံခြုံအသုံးပြုနိုင်စွမ်းကမ်းလှမ်းတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
backend ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု: ဇာတိပေါင်းစည်းမှုနှင့် S3 API ကိုထောက်ခံမှုမှတဆင့် Caringo swarm အနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအခြေခံအဆောက်အအုံဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ Boot-ထံမှ-ရှင်းလင်းသော-သတ္တုတပ်ဆင်ခြင်းများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ကာကွယ်မှုဆောင်ခဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုများပြားများအတွက်သိုလှောင်မှုပစ်မှတ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ swarm ဘက်ပေါင်းစုံ feeds တွေကို (အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူး) ပင်အများဆုံးတင်းကြပ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမူဝါဒများနှင့်တွေ့ဆုံရန်တစ်ဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး (DR) အတွက်ဝေးလံသော site ကိုသို့မဟုတ် Worms, ဥပဒေရေးရာ Hold များ, သမာဓိတံဆိပျနဲ့တူ built-in လိုက်နာမှု features တွေလုပ်ဖို့ပုံတူပွားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစဉ်ဆက်မပြတ် protected နှင့်ချက်ချင်းသုံးစွဲနိုင်ကြသည်အတိုင်းဤအသုံးပြုသူများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။
swarm ရဲ့နောက်ခံနည်းပညာ & Key ကို differential
စျေးကွက်အခွင့်အလမ်း Caringo ရဲ့အစောပိုင်းအသိအမှတ်ပြုမှုသူတို့စနစ်ကမြေပြင်ကိုတက်ရာမှတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အခွင့်အလမ်းကြှမျးကနည်းပညာသက်ဆိုင်ရာခေတ်ရေစီးကြောင်းထင်ဟပ်စေတဲ့နည်းပညာကိုလမ်းပြမြေပုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ယင်း၏ယှဉ်ပြိုင်မှုအချို့နှင့်မတူဘဲအဘယ်သူမျှမ ADDED ရှုပ်ထွေးမျှမလိုအပ်သော overhead နှင့်အချက်အလက်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုနီးပါး Non-တည်ရှိအန္တရာယ်ဆိုလိုတယ်သောအဖုံးများအောက်တွင်အဘယ်သူမျှမ inode-based ဖိုင်စနစ်, ရှိနေပါသည်။
Caringo swarm တစ်သိုလှောင်မှု operating system ကိုသို့မဟုတ်သိုလှောင်မှုများအတွက်လွန်ကဲကဲ၏အရွယ်မှာကို web server ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအားလုံး node များတူညီ function ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ကဲ့သို့သောကသေတ္တာထဲကအလွန်အမင်းရရှိနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာအချိုးကျတဲ့နိုင်ငံမဲ့ဗိသုကာအဖြစ်အကောင်အထည်ဖော်နေသည်။ ရလဒ်အဖြစ် Ring ကိုအရသိရသည် Caringo ဖောက်သည်ဒေတာအရှုံးဘယ်တုန်းကမှမရှိဖူးဘူး။ အဆိုပါအရွယ်မှာဗိသုကာ throughput တိုးပွါးကြောင်းသေးငယ်တဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ပြွတ်မှတက်စကေးဖွင့်, ပေါက်အဖြစ် disk ကိုပြန်လည်နာလန်ထူအချိန်လျော့နည်းစေပါသည်။ swarm ဒေတာနှင့် metadata ကိုဒေတာ Self-ဖော်ပြခြင်းနှင့်ခရီးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်သေချာစေရန်အတူတကွနေထိုင်ရတဲ့ခိုင်မာတဲ့ metadata ကို component တစ်ခုခြင်းနှင့်စတိုးဆိုင်များစစ်မှန်တဲ့တ္ထုရှိပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကသီးခြား databases ကိုအရာဝတ္ထုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လိုအပ်သောသို့မဟုတ်အသုံးပြုကြသည်။ swarm ပြီးတော့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် metadata ကိုရှာဖွေရေးခွင့်ပြုပါရန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့်အတူဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပေါင်းစပ်။
ရလဒ်အနေနဲ့က၎င်း၏ယှဉ်ပြိုင်မှုသာရှိပြီးပြည်ပမှ swarm ရဲ့သော့ချက် differential အောက်ပါအထိချုပ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
Key ကို differential:
95 hard drive ကိုနေရာ% နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိုလှောင်ဘို့မရရှိနိုင် drive ကို bays ၏ 100% အထိပေးအပ် content များအတွက် Hardware နဲ့ server ကိုအသုံးချ
အလိုအလျှောက် 90 စက္ကန့်အတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ပိုင်ဆိုင်မှုရယူသုံးရေးမှကျချိန်သို့မဟုတ်နှောင့်အယှက်မရှိဘဲ petabytes နှင့်ဖိုင်များဘီလီယံရာပေါင်းများစွာမှဟာ့ဒ်ဝဲမှုကြီးလျှော့ချအဆင့်မြှင့်တင်ရန်နိုင်စွမ်း
လျင်မြန်စွာလက်လှမ်းသို့မဟုတ်အသေးဆုံးဒေတာစင်တာကိုခြေရာ ransomware တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်အသံတိတ်ဒေတာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုဆန့်ကျင်ခုခံနေချိန်တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်လုပ်ငန်း-grade ကိုကြာရှည်ခံမှုပို့ဘို့အညှိနိုင် automated မူဝါဒအ-based ကာကွယ်မှု
အပြန်အလှန်ဖလှယ်သည် HTTP, S3, ဒါမှမဟုတ် NFS မှတဆင့် cross-platform ကိုပူးပေါင်းနှင့်တစ်လောကလုံး access ကို (/ Edit / ဖတ်ရေးပါ)
ထုံးစံ metadata ကို add လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်ရှာဖွေရေးမှတဆင့်လျင်မြန်သောပိုင်ဆိုင်မှုပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် instant ပေးပို့
swarm ရဲ့အသုံးပြုသူ Friendly ပေါင်းစည်းရေး
Caringo ရဲ့ swarm software ကို granularly ဖောက်သည်ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်သို့သို့မဟုတ်လက္ခဏာသက်သေ-based authentication ကိုမှတဆင့် plugging, လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိမှုပေးစဉ်တိပ်၏ကုန်ကျစရိတ်ချဉ်းကပ်, PBS မှ TBS ကနေကြီးထွားနိုငျသောမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းကိုစံဟာ့ဒ်ဝဲ၏အသုံးပြုသူရဲ့ရွေးချယ်မှုအပေါ်တပ်ဆင်ပြီး။ swarm လျင်မြန်စွာတိုက်ရိုက်ပေါင်းစည်းမှုများအတွက်သည် HTTP 1.1 အပေါ်အခြေခံပြီးအနားယူ interface ကိုရှိပြီးအမေဇုန် S3 API ကိုထောက်ခံပါတယ်။ box ကိုထဲက swarm အတူ S3 API ကိုအလုပ်ကိုထောက်ပံ့သောအများစုကပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းနည်းများ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, swarm တစ်ခု NFS interface ကိုအဖြစ်အလိုအလျှောက်လုယက်ဖို့က Windows file server များနှင့် NetApp filers ထံမှ tiers ပေးတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲရှိပါတယ်။
ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီကဲ့သို့သောစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ထုတ်ကုန်နှင့်အတူ၎င်း၏ software ကိုပေါင်းစပ်ထားသည် အင်ဂျင်ရောက်ရှိ Levels နဲ့အပြင်အသုံးပြုပုံ FileCatalyst, Marquis မီဒီယာPixit မီဒီယာကနေ PixStor အဘို့နှင့် Ngenea HSM ။
ဒီအကဆြုံး, Caringo များ၏ပေါင်းစည်းမှုထုတ်ပြန်ကြေညာ မိုက်ကရိုဆော့ဖ Azure များအတွက် Hybrid ကိုမိုးတိမ်အလုယက်, အသုံးပြုသူများ Azure ဇာတိမိတ်ဆွေအတွက် blobs ကို format နဲ့ Azure မှ S3, NFS များနှင့် HDFS ဖိုင်များကိုပုံတူပွားဖို့ခွင့်ပြု။ ချောမွေ့စွာတစ်ဦး S3 အရာဝတ္ထု, Caringo အရာဝတ္ထု, Azure မိတ်ဆွေအတွက် blobs သို့မဟုတ် NFS လက်လှမ်းဖိုင်ကနေဖိုင်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသူများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ရေရှည် archive ကို Azure ဖိုင်များကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
အများစုမှာမကြာသေးမီက, Caringo ကဆက်ပြောသည် Caringo Drive ကို၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်လိုင်းမှ swarm များအတွက်ကို virtual drive ကို။ Caringo Drive ကို MacOS ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်® နဲ့ Windows® စနစ်များ, ဖောက်သည်များအဆင်ပြေလက်လှမ်းရှိသည်နှင့်လွယ်ကူစွာနောက်ခံအပြိုင်လွှဲပြောင်းနှင့်အတူ swarm ရန်နှင့်ဖိုင်များကို drag and drop နိုင်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းအရာကိုအပ်လုပ်တင်ထားသည်များအမြန်နှုန်းနဲ့ရိုးရိုးပေးပါသည်, applications များထံမှလုယက်ရန်ဝင်ရောက်ခွင့်-based မောင်းတယ်။
ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ဘက်စုံ Feature ကိုသတ်မှတ်မည်
"စတင်ဖွဲ့စည်းထံမှကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်သိုလှောင်မှုဘောဂဗေဒကိုပြောင်းလဲခဲ့," Ring ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ "ဒါကကိုယ့်အကြောင်းကိုကုန်ကျစရိတ်သည်မဟုတ်,, ဝင်ရောက်စည်းရုံး, ကိုအပ်နဲ့ထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမီဒီယာတစ်ခုလုံးဖြစ်စဉ်ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့အကြောင်းကို။ " လက်စွပ်အဆိုအရ swarm ပေးခြင်း, Agnostic Hardware နဲ့ tunable (x86 Hardware နဲ့ disk ကိုစွမ်းရည်မဆိုပေါင်းစပ်) ဖြစ်ပါသည် အသုံးပြုသူများက high-performance ကိုပြွတ်သို့မဟုတ်မှောင်မိုက်မော်ကွန်းတိုက်ဘို့ခွင့်ပြုဟာ့ဒ်ဝဲ၏ရှေးခယျြမှု။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, လုယက်, မည်သည့်အရွယ်အစားဖိုင်သိုလှောင်ပင် TBS နှင့်သေးသောအလွန်ကောင်းစွာသေးငယ်တဲ့ဖိုင်တွေကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများသည်မီဒီယာ၏သမာဓိထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲအဆက်မပြတ်ဟာ့ဒ်ဝဲကို update များနှင့်မီဒီယာများ၏လျင်မြန်စွာပြန်သုံး enable လုပ်ဖို့ရှာဖွေရေးပေးနေချိန်မှာသိုလှောင်မှု Silo များဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ နှင့်အညီ, မီဒီယာကိုယ်တိုင်ကနှင့်အတူထုံးစံ metadata ကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနိုင်ဖြစ်ခြင်းယခုသို့မဟုတ်အနာဂတ်တွင်မီဒီယာ Self-ဖော်ပြနှင့်မည်သည့်လျှောက်လွှာကနေလက်လှမ်းအောင်, metadata ကို databases ကို၏ခေါင်းကိုက်ရှင်းလင်းစေပါတယ်။ အဆိုပါရလဒ်ဖိုင်စနစ်က-based ဖြေရှင်းချက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာပိုင်ဆိုင်မှု 75% ၏သိုလှောင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနေချိန်တွင်ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာ Workflows streamlines တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင် swarm ယင်း၏ယှဉ်ပြိုင်မှုကနေထွက်မတ်တပ်ရပ်စေသည်အချို့သောသော့ချက်အင်္ဂါရပ်ယူ-Away ဖြစ်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိက, အများပြည်သူဒါမှမဟုတ် hybrid configurations
single-site ကိုသို့မဟုတ် Multi-site ကိုဖြန့်ကျက်
multi-အိမ်ငှားများနှင့်မီတာ: (စသည်တို့ကိုအေဒီ, Pim) စံစနစ်များကိုမှချည်ထားသောစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းနှင့်အတူအများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကအတှကျအသုံးပွုနိုငျသော multi-အိမ်ငှားမိုဃ်းတိမ်ကို
လုပ်ငန်းဝိသေသလက္ခဏာစီမံခန့်ခွဲမှု (LDAP, အေဒီ, Linux ကို Pam)
unified Web ကို console နဲ့အစီရင်ခံ
ad hoc ရှာရန်, Query နှင့် Analytics မှ
ပြန်သုံးဘို့ရှာဖွေမှုများကိုကယ်တင်နိုင်စွမ်း: Kibana နှင့်အခြား application များသဖြင့်သွင်းကုန်များအတွက် JSON သို့မဟုတ် XML လိုမျိုးကယ်တင်
90 စက္ကန့်အတွင်းစပျစ်သီးပြွတ်မှဆာဗာများကိုမဆိုစွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်စွမ်းရည် Add; swarm ယင်ကောင်အပေါ်ဝန်ချိန်ခွင်စောင့်ရှောက်မှုကြာ
Windows နဲ့ချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းမှု® ဖိုင်ဆာဗာများနှင့် NetApp® ပွင့်လင်းအသုံးပြုသူနှင့် application data ကို access ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း filers
သည် HTTP, NFS, S3 နှင့် Azure မိတ်ဆွေအတွက် blobs ကိုအဘို့တစ်ခုတည်း namespace မှတဆင့် universal access ကို
အကွာအဝေးနှင့်အတူ streaming တိုက်ရိုက်ဟာ HTTP ရှည်အမြီးအကြောင်းအရာနှင့် OTT အကြောင်းအရာပေးပို့များအတွက်စံပြထောက်ခံမှုဖတ်
စဉ်ဆက်မပြတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (အစာရှောင်ခြင်း, တက်ကြွသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ပွားနှင့်အတူ node ကို-ပျက်ကွက်-ခံနိုင်ရည်ဒီဇိုင်း, Self-သည်အနာပျောက်စေသော)
ကြွင်းသောအရာမှာဒေတာအတွက်ဖျက်နိုင်တဲ့ coding နဲ့ AES-256 encryption ကို
24 ထောက်ခံမှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှု× 7
worm: ကတစ်ဦးရဲ့ကြောင့် file ကိုရရန်မနိုင်စွမ်းနှင့်အတူစစ်မှန်သော worm စွမ်းရည် အမည်းရောင်သေတ္တာ ဖိုင်တစ်ဖိုင်စနစ်ကမပစ္စည်း
အကူးအပြောင်းအတွက် data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သမာဓိစောငျ့ဖျံ
ပါဝါအသုံးပြုမှုအတွက် 70% လျှော့ချရေး: မူပိုင်ခွင့်အာဏာကိုနှိမ့်ချနည်းပညာ
သိုလှောင်မှု TCO အတွက် 75% လျှော့ချရေး: အများအပြား petabytes ထက်နည်းလူတစ်ဦးကစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်
95% အသုံးဝင်သော disk ကိုစွမ်းရည်မြှင့်
ကျရှုံးခြင်းမရှိတစ်ခုတည်းအချက်နှင့်အတူ 100% င့်နေချိန်:7ကတည်းက 24 / 365 / 2005 ဝန်သက်သေပြ
Caringo ရဲ့ "ကိုသင်ယူ-by-လုပ်နေတာ" ဆို bug တွေကိုထုတ်လုပ်ကိုင်ဖို့အချိန်ကဆက်ပြောသည်အကျိုးကျေးဇူးနှင့်အတူဒဿနသူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုလုယက်ထားဟာအလွန်အားကောင်းတဲ့နှင့်ပြည့်စုံသောအင်္ဂါရပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ အားလုံး node များသငျသညျရိုးရှင်းစွာကွန်ယက်မှ up ပြုလုပ် hooking နှင့်ရှင်းလင်းသော machine ပေါ်တွင် powering အားဖြင့်စပျစ်သီးပြွတ်အားအသစ်သော server ကို add နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကအားလုံးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်သော swarm ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ယက်ကျော်နယူး node များ Boot တက်နှင့်ချက်ချင်းထက်နည်း 90 စက္ကန့်အတွင်းစပျစ်သီးပြွတ်ကိုထည့်သွင်းခြင်း, လုယက်ယင်ကောင်အပေါ်ဟန်ချက်ညီဝန်၏စောင့်ရှောက်မှုကြာနေကြသည်။ အခြားအ Implementation ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ရှုပ်ထွေးနှင့်ကျရှုံးမှုမှတ်တိုးမြှင့်, အသီးအသီး node ကိုများအတွက်တိကျသောအခန်းကဏ္ဍသတ်မှတ်နိုင်ရန်စီမံအုပ်ချုပ်သူကိုလိုအပ်သည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တစ်ဦး NEP, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်ထုတ်လွှင့်ဖြစ်ရပ်များထုတ်လုပ်ရန်အဖွဲ့အစည်းများ enable လုပ်ဖို့နည်းပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ဦးပံ့ပိုးပေးသူ, 2010 ကတည်းက Caringo ဖောက်သည်ခဲ့," Ring ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ NEP ဒီဇိုင်းနှင့် Caringo swarm သုံးပြီးနယ်သာလန်အတွက်အရွယ်မှာ, ယုံကြည်စိတ်ချရသော, high-performance ကိုအကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးကွန်ယက် (CDN) တပ်ဖြန့်ထားသည်။ အဆိုပါ NEP CDN ပေးဆောင်-per-အမြင်မှလစဉ်စာရင်းပေးသွင်းမှုများမှအထိကွဲပြားခြားနားသောစားသုံးမှုနည်းလမ်းများနှင့်အတူဝင်ရောက် 650,000 အသုံးပြုသူအကောင့်ထက်ပိုမိုဆောင်ရွက်ပါသည်။
Gerbrand က de Ridder R & D ကိုဌာနမှူးများနှင့် NEP ၏ခဲစနစ်ဗိသုကာ, အဆိုပါနယ်သာလန်အဆိုအရသူတို့နှင့်အတူ coupled ၎င်း၏ CDN မှအပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုသည်နှင့်စွမ်းရည်, ကုန်ကျစရိတ်, throughput, ကြီးထွားမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပြည့်စုံသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ့်ပြည့်စုံပလက်ဖောင်းလိုအပ် အပြည့်အဝဟာ့ဒ်ဝဲလွတ်လပ်ရေး။ Caringo swarm အများအပြားရောင်းချသူပါဝင်သည့်ရှည်လျားသောအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပြီးရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ "သူကကျွန်တော်တို့ကိုအများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပလက်ဖောင်းကြီးနှင့်ကောင်းမွန်သောနှုန်း terabytes လိုင်စင်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ Caringo swarm ကို ရွေးချယ်. ," Ridder ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့က 100 TBS နဲ့စတင်ယခုကွဲပြားခြားနားသော hardware ရောင်းသူတွေကထံမှ 1.25 node များအနှံ့ 200 PBS ကျော်ရှိသည်။ Caringo swarm NEP အမြဲများအတွက်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ကြောင်းကို High-end အရည်အသွေးကိုဝန်ဆောင်မှုကယ်နှုတ်တော်မူရန်သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ "
ယနေ့ Caringo swarm က NEP လူသိများသော High-end အရည်အသွေးကိုဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေဝန်ဆောင်မှုကယ်နှုတ်တော်မူရန်သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းအောင်, throughput ၏ 45Gb / sec အပ်နှံသည်။ Ridder ဆက်လက် "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Caringo swarm အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှု system ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ပြည့်စနစ်ကစီမံခန့်ခွဲသူမရှိဘူး။ များသောအားဖြင့် system ကိုဖွစျသှားသောသာပြဿနာ။ တစ်ဦး node ကိုလျှင်သို့မဟုတ်တစ် disk ကိုပျက်ကွက်, သာအစားထိုးသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း "ထိုအကြောင်းကြောင့် swarm ရဲ့ Self-သည်အနာပျောက်စေသောစွမ်းရည် built-in ၏တစ်ဦး node ကိုသို့မဟုတ် disk ကိုပျက်ကွက်နေတဲ့ကပ်ဘေးဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်မဟုတ်ပါဘူး ။ စနစ်အတွင်းကအခြား node များမပြတ်မတောက်စစ်ဆင်ရေးအားဖွင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ Ring ကို Caringo ရဲ့သမိုင်း၌အဘယ်သူမျှမဒေတာအရှုံးရှိခဲ့ရဲ့တောင်းဆိုနိုင်တဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ပါပဲ။
အနာဂတ်ကိုကြည့် Ring ကိုအားလုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများအနှံ့စပ်သောမိုဃ်းတိမ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကွဲပြားပြောင်းရွှေ့ရှုမြင်ပေမယ့်အထူးသဖြင့် M & E space ကိုပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, Caringo elastic သိုလှောင်မှုနှင့်ကွန်ပျူတာလိုအပ်ချက်အဘို့မိုဃ်းတိမ်နှင့်ထံမှအချက်အလက်များ၏ချောမွေ့စွာ tier တည်ဆောက်နေသည်။ ပိတ်ပွဲအတွက်, Ring ကို "ကျနော်တို့နောက်ထပ်ပိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှည်လျားအချိန်နှင့်အနာဂတ်ဖောက်သည်အစေခံရန်မျိုးစပ်သောမိုဃ်းတိမ်ဖြေရှင်းနည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ OEMs နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက်နှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာခေါင်းဆောင်မှုထူထောင်နေချိန်မှာဖောက်သည်ဗဟိုပြုဆန်းသစ်တီထွင်မှုမောင်းထုတ်ရန်ဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ " ကောက်ချက်ချ
ငါပိုကောင်းတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဆိုသည်နိုင်ဘူးနဲ့ကျွန်မအလွန်အမင်းသငျသညျမှာကသူတို့ရဲ့ website သို့ထုတ်စစ်ဆေးကြောင်းအကြံပြု www.caringo.com.
အမေဇုံ S3: တိမ်တိုက်မှ CatDV မော်ကွန်းတိုက် အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Caringo CES2017 မိုဃ်းတိမ်ကို မိုဃ်းတိမ်ကိုအခြေခံသည့်ဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်း disk မော်ကွန်းတိုက် disk ကိုစွမ်းရည်မြှင့် ပေါင်းစည်းမှု MStar object သိုလှောင် အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome လှံ & Arrows သိုလှောင်ခြင်း တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality လုပ်ငန်းအသွားအလာ 2017-12-07
ယခင်: အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှု, ဖြန့်ဝေ, လျာထားသောခံရနိုင်သလားကြည့်ရှုခြင်း, တင့်တယ်ဒါမှမဟုတ် ...
နောက်တစ်ခု: သီးသန့် Repack transmitter နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ Hearst ရုပ်မြင်သံကြားပေးဖို့ GatesAir